Loollanka U Dhexeeya Aqoonta Iyo Beelnimada W/Q: Cali Cabdi Coomay
Sunday January 12, 2020 - 09:24:19 in Articles by Hadhwanaag News
Wasaaradaha iyo hayadaha madaxa bannaan ee ay dawladda
Soomaalilaan maamusha waxa ay sannadkii shaqaalaysiiyaan shaqaale badan oo badhkood lagu soo xulo aqoon qaar kalena lagu soo xulo saami beelnimo. Wakhtiyadii ay soo bilaabmatay shaqaale dawladeed oo imtixaan laga qaado, si loo ogaado heerka aqoontooda, ayaa waxa dhacay dood salka ku haysa inay aqoontii ka horimanayso nidaamkaii beelnimo ee ay Soomaalilaan waxa ku qaybsan jirtay. Cafarta, soomaalida, oromada, saaxo, beejo iyo axmaarada waxa ay ka soo wada jeedaan sinjiga ximaatikad, waxa aanay dhaqan u leeyihiin iskaashiga reernnimo iyo qabyaalad cuskan. Qoraaga Brockman , buugiisa la yidhaa "British Somaliland”, wuxuu ku sheegay inuu ku arkay NFD mar uu booqday xoolo-dhaqato Soomaali ah oo nin kastaa awrkiisa wato, oo aanu wax xidhiidhi ahi ka dhaxayn, ka dib wuxuu buugiisaa ku qoray” Somalis are independent in nature and each man is his own Sultan. Oo nuxur ahaan noqonaysa " Soomaalidu abuur ahaan waa dad kala madax bannaan oo nin kastaa gaarkiisa suldaan u yahay”.
= Doodda Beelnimada: dhaqan ahaan Soomaalida ku dhaqan geeska afrika oo ay Soomaalilaan ka mid tahay, waxa ay wax ku qaybsan jireen beelnimo. Waxa ay halhays u lahaayeen odhaahda Soomaaliga ah ee "Tolkaa iyo kabtaada dhexdaa lagaga jiraa”. Markii loo soo guuray magaalooyinka dhaqankii beelnimo waxba iskamay beddelin, maanta hadaad eegto magaalooyinka Soomaalilaan reer kastaa wuxuu degan yahay xaafad gaar ah, waana sidii loo deganaa miyiga. Wakhtiyadii uu Ingiriisku yimid Soomaalilaan ka hore wuxuu soo diray sahamiyeyaal saancadaale ah oo warbixin ka keena hab-dhaqanka shacabka Soomaalilaan.